Ah Molly anga andinetsa! – VanodaZvinhu
by DrSviro · January 9, 2016
Kopje yakanga yakapenga, havisi vakadzi ivavo. Waita sarura ude, vaiti vakobvu, vatete, vatsuku, vatema tema, vechidiki nevabvezera.Vakadzi vakange vakazara munzira, kuzoti muFlats mavaitira basa,rakange riri jamba jamba, pamberi pe bhawa neNightclub, yaiva sarura ude vakange vakazara kuti shutu. Ndaka mira mira ndichiona kuti zvirikufamba sei.
Vakadzi ava vaiita kunge hove, pavakandiona ndakamira ndega vakauya vachimhanya, vamwe vaiuya vakavhura madhirezi pamberi, vamwe vaiuya vakasimudza hembe kanaskirt magaro ese ari panze – vaitoita kunge vachandibvarura.
Mainzi mumba naMolly, akange ari maketeni aiganhura ganhura one room. Waitoona vanhu vachikwirana kana kunzwa vachichemerera.
“Ino ndiyo imba yebasa sahwira ende ndafara kukuona. Ndikupe chekunwa here, but unototenga ndiwe” Molly akabva aseka achitambisa magaro ake
Molly akabva atanga kundibata bata achiisa maoko ake mubhurugwa rangu. Akaiburitsa ndokuibata achinge akabata musoro wenyoka, akapfugama ndokuiisa pazamu rake, ini ndokukovirira panyatso wezamu kusvikira munyatso wamira.
Molly akabva abvisa kajira kaakange kakapfekwa ndichibva ndatokwira mukadzi. Ndakatunda zivisina nguva ndichibva ndaburuka kubva pamusoro paMolly.
“Zvaitwa baba, nokuti uronyo wenyu kudya kwangu but ndo chii chawandita, hapana zvandanzwa apa”
“Vero pinda muno” akabva atomudaidza,
“Shamwari yangu anonzi Vero, uyu muchinda anonzi Rombe, ngatiite chirombe tiri vatatu”